Kupomera UNWTO Secretary-General kunoita iye mutongi nedare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Kupomera UNWTO Secretary-General kunoita iye mutongi nedare
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nhengo yeUNWTO inosanganisira 159 Nhengo dzeMatunhu, Nhengo 6 Dzakabatana nenhengo dzinopfuura mazana mashanu dzinomiririra masangano akazvimirira, masangano edzidzo, masangano ezvekushanya uye zviremera zvekushanya zvemuno.
Munhu anotungamira ndi Secretary-General Zurab Pololikashvili. Iye wezvematongerwo enyika weGeorgia uye mumiriri, ane hunyanzvi uye akadzidziswa mukumanikidza kwezvematongerwo enyika. Ichi chinyorwa chinoratidza kuti hapana chaanotya kana akafunga kumhanyisa ino yakabatana agency sechibhizinesi chematsotsi.
Masangano eUN akasarudzika masangano akazvimiririra epasi rese anoshanda ne United Nations.
Vese vakaunzwa muhukama neUN kuburikidza nezvibvumirano zvakataurirana.
Vamwe vaivapo Hondo Yenyika Yekutanga isati yatanga. Vamwe vaibatanidzwa neChinzwano cheMarudzi. Zvimwe zvakasikwa nguva imwechete neUN. Zvimwe zvakagadzirwa neUN kuzadzikisa zvido zviri kubuda uye zvinoita sekunge zvido zvemunhu akagara UNWTO Secretary General.
Nyika iri mudambudziko, kunyanya, nyika yepasirese yekushanya yakaparadzwa neCOVID-19. Hutungamiriri hunobudirira muWorld Tourism Organisation, Kubatana pakati peUNWTO neWTTC kwakakosha, asi hapana izvi zvave kuitika kubva ipapo Zurab Pololikasvili akave Secretary-General muna Ndira 1, 2018.
Nehurombo, murume mumwe chete anotarisira UNWTO, Secretary-General Zurab Pololikashvili akakwanisa kutamba makadhi ake. Dambudziko roga nderekuti, akagadzwa nekumanikidza, kubiridzira kwesarudzo, uye ave kutonga kuti anzwe uye agadzirise chero chichemo chake.
Chikamu chega chinosuwisa ndechekuti, nyika zhinji dzenhengo dzeUNWTO dzine zvisungo zvematongerwo enyika, uye hazvizobate iyi nyaya. Dzimwe nyika hadzisi kuzvinzwisisa, vashoma vanogona kunge vasina hanya nazvo.
Mr. Zurab Pololikasvili angangodaro asiri iye Secretary-General Zurab Pololikasvili nhasi, kana sarudzo dza2018 dzakaitwa mushe uye nemitemo.
Zvinova pachena kuti mitemo yakaputswa pese pamusangano we2017 Executive Council muMadrid, uye zvakare kuGeneral Assembly kuChengdu mu2018, ichibvumira Zurab Pololikasvili kuve wekutanga kusarudzwa uye kechipiri kusimbiswa. Inogona kunge iri mhosva yakakwana.
Chiito chekutora danho chakaitika masikati machena apo aimbova Secretary-General Dr. Taleb Rifai akaudzwa zvisizvo nemaune chipangamazano wake wezvemutemo uyo akazogashira kukwidziridzwa kukuru naiye Secretary-General aripo Zurab Pololikasvili.
Mushure memakore 3 eTurboNews pakupedzisira akagamuchira kuongororwa kwepamutemo kwemaitiro uye ari kuronga kuiburitsa vhiki ino.
Nyika dzaive dzichitumira mari yehunhengo kuUNWTO kuMadrid. Vanga vachizvitumira kusangano rinotungamirirwa nemunhu mumwe uye vazhinji vanoti mhanya kuti ubatsirwe, Zurab Pololikasvili. Zurab Pololikasvili chinangwa chekupedzisira chingave chekuva Mutungamiriri weGeorgia.
Zurab Pololikasvili ndiye munhu mumwe asiri kungotarisa UN Inobatanidzwa Agency asiwo ari munhu angave nesarudzo yekupedzisira pane zvese nyaya kana zvichemo. Iye ndiye mutongi uye juri muUNWTO. Dare Rekutarisira reUN harisi basa reUNWTO.
Kunyangwe hazvo nyaya yekubiridzira musarudzo ya2017 / 18 ichigona kuunzwa pamberi, hapana mhedzisiro kune vanopomerwa panguva ino.
Mhedzisiro chete ndeyekuti UNWTO General Assembly gore rino irambe kusimbiswa kwe Zurab Pololikasvili kwetemu yeMunyori-Mukuru kutanga muna 2022.
Hazvisi pachena kuti General Assembly ichaitika riini uye kupi. Iyo yakarongwa GA yaGumiguru muMorocco inova inowedzera kure kure.
Ichi chingave chiri chirongwa zvachose. Nenhengo zhinji dzenhengo dzemu Africa, vangangotadza kutumira gurukota kuMadrid, kana chiitiko ichi chikadzoserwa kunzvimbo iyo UNWTO ine mahofisi makuru Kusimbiswa kunenge kuri nyore zvikuru nenyika shoma dzichipinda musangano mukuru.
Yayo chete inopfuura mwedzi inopfuura kuMorokota General Assembly, uye hapana kana chinhu parizvino chakarongwa kana kuziviswa. Izvi zvinogona kuve zvese chirongwa chemberi kuronga Zurab Pololikasvili.
Chii chekuita kana paine nyaya neUN Agency?
Sangano reUnited Nations reInternational Oversight Services ihofisi yakazvimirira iri muUnited Nations Secretariat ine basa rekuti "tibatsire Secretary-General mukuzadzikisa basa ravo remukati rekutarisira maererano nezviwanikwa nevashandi veSangano.
Iri sangano asi harina simba pamusoro penzvimbo yakabatana neUN, kusanganisira iyo World Tourism Organisation (UNWTO)
Chii chinonzi UN Yakabatana Sangano seUNWTO?
Sangano reUN rinoumbwa neSecretariat hombe uye yakapihwa yoga mari uye zvirongwa nemapazi akasarudzika.
Semuenzaniso, mari uye zvirongwa zvinosanganisira United Nations Yevana Fund uye iyo United Nations Development Chirongwa, idzo dzine vakuru vakuru uye vakuru vakuru asi vari pasi pechiremera cheUN Secretary-General. Mukupesana, masangano akasarudzika, senge Chikafu neZvekurima Sangano, iyo World Tourism Organisation (UNWTO) vane yavo yekutonga miviri uye vatungamiriri misoro uye havasi pasi pechiremera cheUN Secretary-General.
Iwo masangano, ayo akazvimiririra zviri pamutemo masangano epasirese nemitemo yavo, nhengo, nhengo, uye zviwanikwa zvemari, vakaunzwa muhukama neUnited Nations kuburikidza nezvibvumirano zvakataurirana.
The World Tourism Sangano ndiyo United Nations agency inoona nezve kusimudzira kwekushanya kune mutoro, kuenderera, uye kunowanikwa pasi rese
UNWTO Secretary-General ndiye mukuru weiyi yakazvimirira UN Affiliated Agency. Zvazvinoreva:
Kunyunyuta pamusoro pekubiridzira, huwori nehunyengeri paUNWTO Secretary Election muna 2017/18 zvaizotongwa nemupomerwa.
Kubata uye kusarura pa2021 UNWTO Secretary General muna 2021 zvaizotongwa nemupomerwa.
Nehurombo, UN haizotarise kunyunyuta kwakadai. MuMhuri yeUN, maAgency akasarudzika akazvimirira, hapana hutungamiriri. UN pachayo haina simba pamusoro pemamwe masangano.
Iyo Joint Inspection Unit, inova yakajairika mutumbi weUN System inogona kuitarisa. Zvinenge zvisingaite kuti muviri uyu upinde, Inotaurira UNWTO pachayo, uye kwete kune mumwe munhu.
Ramba wakarongedzerwa nemishumo iri kuuya pamusoro eTurboNews nezve iyi nyaya.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 30
Mary Tomita anoti:
Nyamavhuvhu 30, 2021 pa05: 45